I-STP Forex Broker - Inkampani ye-Forex Central Clearing (FXCC)
Buka ividiyo egcwele
Isiphequluli sakho asisekeli ividiyo ye-HTML5.
I-FXCC yasungulwa ku-2010 yiqembu labaqeqeshi bezimakethe zezezimali zangaphandle, ekwakheni ulwazi lwabo olude ezimakethe zezezimali, bazama ukudala isevisi esekelwe emazingeni aphezulu amazinga abayodinga njengamakhasimende. Le nkampani ihlanganisa iqembu elizinikele labachwepheshe abanolwazi olunzulu embonini yezezimali.
Ukuhlinzeka ngesiphakamiso samakhasimende amaningi kakhulu embonini. Sizibophezele ekuphumeleleni kwamakhasimende ethu, ngokuletha amanani okuncintisana, ngokusebenzisa inqubo ehle kunazo zonke yokuhleleka kwempahla emakethe yokuhweba i-forex yokuhweba. Inhloso eyinhloko ye-FXCC ukunika amandla amaklayenti ayo ngawo wonke amathuluzi adinga, ukuthuthukisa amakhono abo, ngenkathi ejabulela isipiliyoni sokuhweba esingenakulinganiswa, kuzo zonke izinyathelo zohambo lwabo.
Ukuthenjelwa, okungajwayelekile futhi okulungile
Imodeli ye-ECN / STP ye-FXCC inikeza ochwepheshe, abahwebi abakhuthele, abaphathi be-hedge fund namakhasimende ezinkampani abanokufinyelela ekusakazeni kwangempela kwesikhathi kanye namanani okuncintisana ngqo kusuka ekuhlinzekeni abahlinzeka ngemali ye-multibank.
Imodeli ye-ECN / STP inikeza amaklayenti e-FXCC inkululeko yokudayisa ngezinga eliphakeme lokudlala. I-FXCC isebenze kanzima ekwenzeni umhlaba we-Forex ubala ngokucacile nokulawula okuningi kulabo abahwebi.
Imodeli yebhizinisi ekhonjiwe isekelwe ekusebenziseni i-Straight Through Processing (STP), lapho yonke imiyalo yamakhasimende e-FXCC ithunyelwa eziNhlanganweni zezeMncintiswano ezifanele futhi ezifanelekile, ukuqeda amandla okuba yiziphi izintengo, noma ukuphikisana kwezintshisekelo phakathi kwamaklayenti ayo.
Imodeli yokukhishwa kwe-'No Dealing Desk 'yeFXCC ivela ngaphandle kokungenelela komthengisi futhi akukho ukucaphuna kabusha. Amaklayenti amakhasimende akwenziwa ngamanani anikezwe ku-FXCC ngabanikezeli bawo bezimali. I-Aggregator ye-Price ihlola ngokuzenzakalela laba abathengisi ngakho baqinisekiswa ukuthi bavele bezuza inhlanganisela yebhizinisi / ye-Bid engcono kakhulu, ukuqinisekisa ukuthi wonke ama-oda aphethwe ngendlela enokuncintisana futhi ebonakalayo.
Kungani Kufanele Ubeke Esijwayelekile uma unakho
Okuhlangenwe nakho nokuqalwa
On Traders side kusukela 2010, kulandela izinqubo best kanye nezinqubo ukuhlangabezana okulindelwe
Njengoba sibe namazinga aphezulu okuhlangenwe nakho nolwazi, sisekelwe kahle ukuze siqonde izidingo zamaklayenti ethu futhi sisekele abahwebi ekufezeni izinhloso zabo kanye nemigomo yokutshala izimali. Ngokuhlinzeka ngezigaba eziningi zezinsiza, izinga le-VIP lezinsizakalo, elihlangene nokusekelwa kweklasi lezwe 24 / 5, indawo yethu yokudayisa izindleko eziphansi inikeza isisekelo esihle sokuphumelela.
Ukwenziwa Kweqiniso kwe-STP
Ukuqinisekisa ukuthi wonke ama-oda aphethwe ngendlela enokuncintisana futhi ebonakalayo
Ukugxile ekunciphiseni izindleko zakho zokuhweba kuze kube yilapho futhi ukwandise amathuba akho okuhweba
Sizibophezele ekuphumeleleni kwamakhasimende ethu, ngokuletha amanani okuncintisana, ngokusebenzisa inqubo ehle kunazo zonke yokuhleleka kwempahla emakethe yokuhweba i-forex yokuhweba. I-ECN XL, eyaziwa nangokuthi i-akhawunti ye-ZERO ingenye yama-akhawunti athengisa kakhulu okuhweba.
Indawo eLawula ngokuqinile
Inkampani Yotshalomali ibhalisiwe
ngenombolo yokubhalisa engu-14576.
I-FX CENTRAL CLEARING Ltd
Igunyaziwe futhi ilawulwa yi-CySEC
njengeCyprus Investment Firm (CIF)
ngeNombolo yelayisense 121 / 10.
Buka wonke amaBulungu kanye nokubhaliselwa
Ukukhethwa kwe-#1 yabathengisi
Izindlela Zokuxhaswa Ngezimali